Digital Patrika – मोहन बस्नेत भर्सेस अग्नि सापकोटा : यसकारण बलियो छन् बस्नेत
मोहन बस्नेत भर्सेस अग्नि सापकोटा : यसकारण बलियो छन् बस्नेत
काठमाडौं । मंसिर १० गतेको पहिलो चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सिन्धुपाल्चोकमा १ बाट काँग्रेसका मोहन बस्नेत र माओवादी केन्द्रका अग्नि सापकोटाबीच भीडन्त हुँदैछ । उनीहरुसँगै प्रतिनिधीसभाका लागि १३ जना आकांक्षी मैदानमा छन् । पूर्व सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र वर्तमान मन्त्री दुई हेवीवेट मैदानमा उत्रँदा सिन्धुपाल्चोक १ को चुनावी प्रतिस्पर्धा थप रोचक बनेको छ । बस्नेत बर्तमान सूचना तथा संचार मन्त्री हुन भने अग्नी सापकोटा पूर्व सूचना तथा सञ्चार मन्त्री हुन् । यी दुबै सिन्धुपाल्चोकका लागि महत्वपूर्ण छन् । दुबैलाई निर्वाचन जित्नका लागि उत्तिकै चुनौती छ । यतिखेर दुबैजना आफ्नो पक्षमा मत ल्याउने ध्याउन्नमा छन् । दुवै निर्वाचन जित्ने दावी गरिरहेका छन् र कार्यकर्तालाई आफनो पक्षमा तान्ने उनीहरुको कसरत जारी नै छ ।
माओवादी केन्द्रबाट गत संविधान सभा निर्वाचन क्षेत्र २ बाट विजयी भएका अग्नि सापकोटा यस पटक क्षेत्र परिवर्तन गर्दै सिन्धुपाल्चोक १ बाट भिडेका हुन् छन् । सोही क्षेत्रमा पहिलो निर्वाचनमा जितिसकेका बस्नेत सापकोटाका प्रतिद्धन्द्धी छन् । सिन्धुपाल्चोकमा २ निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । यी दुई निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको बाम गठबन्धन र नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीवीच चुनावी तालमेल भएको छ ।
क्षेत्र नं. १ अन्र्तगत त्रिपुरासुन्दरी, लिसंखु पाखर, सुनकोसी, भोटेकोसी, जुगल गाउँपालिका पर्दछन् भने बाह्रबिसे नगरपालिका र चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाका वडा नं. २, ३, ४, ९ र १० वडा रहेका छन् ।
यस्ता छन् सवल र दुर्लभ पक्ष
सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर १ वामपन्थी आन्दोलनको उर्वर भूमि पनि हो । यसअघि ३ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको सिन्धुपाल्चोक अहिले २ वटा क्षेत्रमा सीमित गर्दा दुई क्षेत्रका केही तह गाभिएका छन् ।
२०४६ साल पछिको निर्वाचन त्यस्तै २०५१ सालको निर्वाचनमा एमालेले बाजी मारेको थियो । २०५१ पछिका ३ वटा निर्वाचनमा दुई पटक कांग्रेसका मोहन बस्नेत र ०६४ को निर्वाचनमा माओवादीले जित्यो । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा एमालेका उमेदवार अरुण नेपाल कांग्रेसका मोहन बस्नेतसँग ३२ मतले मात्र पछि परे ।
गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा क्षेत्र नं. १ मा बाम गठबन्धनले ४३ हजार २ सय ८३ मत ल्याएको थियो भने नेपाली कांग्रेसले २२ हजार ४ सय ३७ मत ल्याएको थियो । यस्तै राप्रपाले ३ हजार ८ सय ६९ मत ल्याएको थियो । यस आधारमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको भन्दा बामपन्थी गठबन्धन बलियो जस्तो देखिए पनि वास्तविकता त्यस्तो देखिएको छैन । काँग्रेसको तर्फबाट मन्त्री भएका बस्नेतको जिल्ला दौडाहा पछिल्लो समय निक्कै बढेको देखिएको छ भने काँग्रेस र माओवादी दुवैले पार्टी प्रवेश गराउने कामलाई निक्कै तीव्रता दिएका छन् ।
क्षेत्र नम्बर १ मा रहेको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका एमालेले जितेको हो भने सुनकोसी गाउँपालिकामा कांग्रेसले जित हात पारेको थियो । त्यस्तै चौतारा माओवादी केन्द्रले जित्दा बलेफी, लिसंखु पाखर, जुगल, बलेफी एमालेले जितेको छ । भोटेकोसी माओवादी केन्द्रले जितेको हो ।
भूकम्पअघि तातोपानी व्यापारिक नाका र धार्मिक महत्वको क्षेत्रसमेत रहेको उक्त क्षेत्र राजनीतिको सामरिक केन्द्रसमेत हो । सापकोटा र बस्नेत दुबै त्यसक्षेत्रको मन जितेका नेताहरु हुन् । क्षेत्र नम्बर १ को प्रदेश सभाका लागि राजेन्द्र श्रेष्ठ र विष्णु खत्री काँग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्धवार छन भने अरुण नेपाल र सरेश नेपाल एमालेको तर्फबाट उमेदवार रहेका छन् ।
पछिल्लो समय गाउँ गाउँमा जनमत बलियो बनाउँदै काँग्रेस अगाडि बढेको छ भने माओवादी प्रतिरक्षात्मक बनेको देखिएको छ । अग्नि सापकोटाको पुरानो क्षेत्र नम्बर २ का अधिकाश स्थानहरु अहिलेको २ नम्बर क्षेत्र परेको कारण पनि अग्नि भन्दा बढी मोहन बस्नेत बलियो देखिएका छन् । विकास र समृद्धिलाई देखाएर भोट मागिरहेका मोहन बस्नेतका अगाडि अग्नि सापकोटा कमजोर देखिदै गएका छन् भने दैनिक काँग्रेसको पक्षमा जनमत बढिरहेको देखिएको छ ।
भाषण गर्न नजान्दा पद नै गुमाउँने यी हुन् मन्त्रीहरु
मोदी आउँदा कस्ले विगा¥यो नेपालको झण्डा, कस्ले लगायो स्वतन्त्र मधेसको नारा ?
केपी ओलीको सरकार राष्ट्रवादी कि लम्पसारवादी ?